Yakatumirwa ne Tranquillus | May 23, 2020 | hofisi
Dashibhodhi muExcel inyaya huru. Ini ndiri wekutanga, ndinogona here kutanga nekugadzira dashibhodhi? Zvinotora nguva yakareba sei? Ndezvipi zviratidzo zvekutarisa zvinobatanidza? Kubva pane inoshanda vhidhiyo mienzaniso. Uye pasina kuve nekurangarira toni yemafomula. Kana kutotanga iyo 10-awa VBA mutauro kudzidzisa kosi. Iwe unogona kuve neinodakadza dashibhodhi isina chinopinda mumaawa matatu kana mana. Izvo zvese zvinoenderana neyakajeka mhando iwe yaunoda kupa kune yako tafura. Kana iwe uchironga kuti iprindwe iparadzire kune vamwe vako. Zvirinani kutarisa pane zvimwe zvinhu uye kuverenga maawa gumi nemashanu. Uye hongu! dhiyabhorosi ari mune zvakadzama.
Madashboard kune chakati chinodiwa
Usati wapinda muchikamu chehunyanzvi. Kutanga iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yako dashboard inosangana neicho chaicho chinodiwa. Fungidzira vamwe vako vauinavo mumba yemusangano. Unopura dashboard rako idzva pane guru girazi. Uye zvakakutora iwe mwedzi miviri. Imwe ine fungidziro yekuti uri mu cockpit yedombo. Kana kuti zviri nani munharaunda yekutambudzika kweiyo gasi fekitari. Hapana munhu anozvinzwisisa. Asi tinoona semuenzaniso kuti huwandu hwemota dzakamiswa munzvimbo yekupaka dzinosanganisirwa. Izvo zvakakosha chaizvo kuti uzive kuti ndeyipi-yakawedzerwa kukosha ruzivo Usatambisa nguva yako. Uye dzivisa kuvhiringa vaunoshanda navo nezvishandiso zvisina basa zvachose zvekushandisa.
VERENGA Tsvaga AccountKiller, we universal user guide iyo inokubatsira kubvisa recalcitrant maakaunti.
Mienzaniso yezvinowanzoonekwa zviratidzo zvekutarisa
Zvirokwazvo dhibhodhi rimwe nerimwe rinofanira kuenderana nemamiriro ezvinhu. Asi mitsetse yakafara inogona kudhonzwa. Isu tinowanzotsvaga kuve nemufananidzo wepamusoro wekutarisa. Iyo dashboard inobvumidza iwe kupindura nekukurumidza mibvunzo yakati wandei.
Zvinangwa zvekutengesa, vhiki nevhiki, pamwedzi, pagore, zvinowanikwa?
Ndeipi nhanho yemasheya edu? Kuputswa nezvigadzirwa, nereferenzi.
Ndeapi mazuva apera ekugadzirisa kukakavara, chii chiyero chekugadziriswa kwezvinetso zvevatengi?
Ndirini patichasangana nenhamba yepamusoro muchiitiko? Vangani vanhu vakawedzerwa vanodiwa kusimbisa zvikwata?
Iko kufambira mberi kweichi kana icho chirongwa?
Iine dhibhodhi yakakodzera pane iwe. Pakutarisisa, iwe unogona kuva nemhinduro kune yakatevedzana mibvunzo yemhando iyi.
Madhibhodhi angu anofanirwa kuve nechimiro?
Kwete, kunyange kana mukuita kwavo vese anotaridzika zvakafanana. Zviri pachena kuti unokwanisa kuita zvaunoda. Munzvimbo yehunyanzvi. Ndinokupa zano kuti ugare padyo neizvo iwe zvaunoona pese pese. Maviri, matatu matatu, rimwe geji. Menyu inobvumira mushandisi kunatsa huwandu. Uye wadii zvishoma zvishoma zvakadzama kumashure kupfuura zvakajairwa. Asi usaenderere mberi.
Zvino enda kudzidzira uye uve dashboard guru muExcel
Mune yega yega yekudzidziswa kwake iwe unobatsira mukugadzira dashboard. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutevedza gwara. Dzimwe dudziro diki dzinoenderana nebasa rako chairo. Uye voila. Usakanda mapfumo pasi panguva yekutanga yakaoma. Kutanga zvakare kana ukasawana chaunoda kuita kekutanga. Uye iwe uchaona, zvichazoshanda. Asi mune emergency pano pane qmimwe mifananidzo yemahara yatogadzirira.
VERENGA Shanda muzvikwata uye nekure kure neSlack .. Tauriranai munguva chaiyo
Rombo rakanaka mukubudirira kwepurojekiti yako…
Dashboards muExcel, kudzidza pasina njodzi yezvikanganiso. May 18th, 2020Tranquillus
pashureMicrosoft PowerPoint: nzwisisa kukosha kwayo uye mashandiro ayo.
zvinoteveraDzidza Chinese chinoshanda - Ultra inoshanda uye yakasununguka nzira